“Ganacsiga Dalka oo lagu ogaaday in maalgashigu kor u kacay sannadda 2012″ USAID | Somaliland.Org
“Ganacsiga Dalka oo lagu ogaaday in maalgashigu kor u kacay sannadda 2012″ USAID
December 18, 2012	Hargeisa (Somaliland.Org)- Cilmi baadhis ku saabsan kalsoonida ay ganacsatadu ku qabaan maalgashiga dalka oo la sameeyey 2012 oo asbuucan la soo bandhigay ayaa lagu ogaaday in maalgashiga ganacsiga heerka dhexe uu labanlaabmay intii u dhaxaysay 2011 iyo 2012. Waxa cilmi baadhistan si wada jir ah u hirgaliyay wasaarada ganacsiga iyo rugta ganacsiga taasi oo ay maalgalisay hay’ada horumarinta u qaabilsan dalka maraykanka ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yidhaa USAID. Cilmi baadhista sannadkan la sameeyay waxa ay daaha ka rogtay in ganacsatada iyo maalgashadayaashuba ay aad ugu kalsoonyihiin dhaqaalaha waddanka”, sidaa waxa yidhi Wasiirka wasaarada Gancsiga, Mudane Abdirizak Ahmed Khalif. Waxa aanu rajaynaynaa in kalsoonidaasi halkaa ka sii socon doonto, siina kordhi doonto oo ay maal galintuna intaa kasoo korodho.ayuu ku daray. Cilmi baadhistan waxa lagu ogaaday in maalgashiga ganacsiga heerka dhexe oo ah inta u dhaxaysa $100,000-$500,000 uu labanlaabmay magaalada Hargeisa intii u dhaxaysay 2011-2012, waxaanu kordhay inta u dhaxaysa 7.5%-17%.
In ku dhow ilaa 300 oo ganacsato ah oo ka kooban gobolada Somaliland oo dhan ayaa ka qaybqaatay cilmi baadhistan, kuwaasi oo ay ku jiraan Dumar iyo Dhalinyaro ganacsato ah, iyo maalgashadayaal qurba jooga oo reer Somaliland ah. Cilmi baadhistu waxay waydiisay ka qaybqaatayaasha su’aalaha ay ka mid yihiin, inay fududahay in ganacsi la bilaabi karo, in la heli karo dad xirfad leh, tayada kaabayasha dhaqaale, nabadgalyada, shuruucda iyo qawaaniinta ganacsi iyo maalgashiba. Cilmi baadhisyo hore ayaa daaha ka rogay inay ganacsatada iyo dadka maalgashiga diyaarka u ahi ay warwar ka qabaan dabacsanaanta xeerka ku saabsan ganacsiga. Iyadoo taa ka shidaal qaadanaysa, ayaa sannadda 2012 waxa ay Hay’ada USAID ka caawisay Wasaarada ganacsiga sidii wax ka badal iyo dib u eegid loogu samayn lahaa xeerka lagu maamulo ganacsiga iyo maalgashiga. Taageerada cilmi baadhistani waxa ay ka timid hay’ada horumarinta maraykanka u qaabilsan ee la yidhaa USAID mushruuceeda loo yaqaan kor u qaadida iskaashiga dhaqaale, kaasi oo ah Mashruuc lacagtiisu ay tahay $13 million, oo loogu talo galay in kor loogu qaado daganaanshaha wadanka iyadoo taana loo marayo maalgalin lagu sameeyo dhaqaalaha dalka, lana xoojinayo, xoolaha, beeraha iyo Tamarta. For more information, please contact Marybeth McKeever at mmckeever@usaid.gov or visit http://eastafrica.usaid.gov/en/home Post navigation
Previous Post“Waa in wixii soo baxa ee Haay’adaha doorashadda qaabilsani ay soo saaraan loo hoggaansamo”Next PostDawladda Koonfurta Sudan oo ku Tilmaantay Dahabshiil Mashiinka Maaliyadda Qaaradda Afrika	Blog